Psa 147 | Mal1865 | STEP | Haleloia; Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika; Eny, mamy sady mendrika ny fiderana.
Haleloia ho an'ny Mpanohana izao rehetra izao, Izay nampody ny fahatsaran'i Jerosalema
1 Haleloia; Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika; Eny, mamy sady mendrika ny fiderana.
2 Manangana an'i Jerosalema Jehovah; Mamory ny Isiraely voaroaka Izy. 3 Mahasitrana ny torotoro fo Izy Sy mamehy ny feriny. 4 Milaza ny isan'ny kintana Izy: Samy tononiny amin'ny anarany ireny rehetra ireny. 5 Lehibe ny Tompontsika sady be hery; Tsy hita lany ny fahalalany. 6 Manandratra ny mpandefitra Jehovah, Fa mampietry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany.
7 Mihirà fiderana ho an'i Jehovah; Mankalazà an'Andriamanitsika amin'ny lokanga, 8 Izay manaron-drahona ny lanitra, Izay mamboatra ranonorana ho amin'ny tany, Izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra, 9 Manome hanina ho an'ny biby Izy Sy ho an'ny zana-goaika izay mitaraina. 10 Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra Azy, Ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany. 11 Jehovah mankasitraka izay matahotra Azy, Dia izay manantena ny famindram-pony.
12 Mankalazà an'i Jehovah, ry Jerosalema ô; Miderà an'Andriamanitrao, ry Ziona ô. 13 Fa manamafy ny hidim-bavahadinao Izy, Sady mitahy ny zanakao eo afovoanao. 14 Mahatonga ny fari-taninao ho fiadanana Izy; Vokisany vary tsara indrindra ianao. 15 Mampandeha ny didiny ho amin'ny tany Izy; Miely faingana dia faingana ny teniny. 16 Mandatsaka oram-panala tahaka ny landihazo ▼
▼ Heb. volon'ondry
Izy; Mampiely fanala tahaka ny lavenona Izy. 17 Mandatsaka ny havandrany ta-haka ny sombintsombin-javatra Izy; Iza no maharitra ny hatsiakany? 18 Mamoaka ny teniny Izy ka mampiempo ireny; Mampifofofofo ny rivony Izy, dia mandriaka ny rano. 19 Milaza ny teniny amin'i Jakoba Izy Ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'Isiraely. 20 Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa Izy; Ary ny fitsipiny tsy mba fantatr'ireny. Haleloia.